Bandhig Faneed Hindiya | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
« Dhaqdhaqaaqa Podcast
Mustaqbalka Tiknoolajiyada Warbaahinta waxay ku xirantahay Halkan
Tiknoolajku wuxuu kobciyaa xawaaraha iftiiminta waxayna si aad ah u saameyneysaa wax kasta oo ay taabato; adduunka iyo fiidiyowga ma kala duwan yihiin. Guud ahaan horumarka cusub ee suurtogalka ah ee warshadani waa mid aan badneyn, marka laga reebo munaasabad gaar ah. Sannad kasta, ee sanadka 27, barnaamijka "India India Show" wuxuu noqonayaa mid dhexdhexaad ah oo muujinaya hal gacan, shaashadda waxay ku beddeshaa tiknoolajiyada casriga ee caalamka. Dhinaca kale, waxay kuu ogolaaneysaa inaad la xiriirto hormarayaasha iyo inaad la kulantaan marwalaha gacanta ugu horreeya.
The Waaxda warbaahinta ee Hindida iyo madadaallada waa mid ka mid ah ganacsiga ugu koraya ee dalka. Qeybta ayaa kor u kacday 11% ilaa USD $ 20 dakhliga guud, sanadka maaliyadeed 2016; sida lagu sheegay warbixinta FICCI. Waxaa la rajeynayaa in ay la xiriirto USD 35 sanadka maaliyadeed 2021. Warbaahinta TV-ga, qaybinta, filimka, daabacaadda, raadiyaha, xayeesiinta iyo dijitaalka waa qaar ka mid ah qaybaha kor u qaadaya koritaanka.
Iyadoo la adeegsanaayo barnaamijka "India India Show 2018", waxaa la joogaa wakhtigii habka loo sii wadi lahaa tiknoolijiyadda soo socota ee soo socota - si dhakhso ah, sahlan, wax soo saar badan iyo siyaabo fara badan oo wax ku ool ah oo looga shaqeeyo warbaahinta, filimka, maqalka, raadiyaha iyo wax kasta oo kale oo keena wacyiga isgaarsiinta - laga soo bilaabo abuurkiisa content illaa maareynta iyo bixinta. Shirkadaha iyo shirkadaha, ciidamada booliska iyo xirfadleyda, alaab-qeybiyeyaasha iyo macaamiisha, aragtida, iyo daneeyayaasha kale ee adduunka oo dhan waxay isu keenaan si ay u xaqiijiyaan fursadaha, abuuraan xiriiro ganacsi oo ay u sahlaan khayraadka isku-dhafan ee ugu weyn sida caadada ah sanad kasta.
Daabacaadkii ugu dambeeyay ee Warbaahinta India Show ayaa soo bandhigtay 9,862 booqdayaasha gaarka ah iyo ka weyn Noocyada 500 Ka-qaybgalayaasha wax ka badan Dalalka 36 oo isu yimaada, waxay jecelyihiin in ay horay uga sii riixaan xajinta koritaanka dhaqsaha badan marka loo eego cid kale. Sida booqde ama kaqeybgalaha, shaki kuma jiro in bandhiga uu ku muujin doono qaababka cusub ee infotainment.